Hoggaamiyaasha xisbiyada Sweden oo xalay fooda isdaray - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Stefan Löfven ra'iisalwasaraaha Sweden (S) oo salaamaya hoggaamiyaha Moderaterna Anna Kinberg Batra (gadaal waxaa ka muuqda afhayeenka xisbiga MP Isabella Lövin iyo hoggaamiyaha Vänsterpartiet Jonas Sjöstedt). sawir: Jonas Ekströmer / TT
Hoggaamiyaasha xisbiyada Sweden oo xalay fooda isdaray
Lövin: waan karnay masuuliyad in aan qaadno
La daabacay måndag 30 maj 2016 kl 12.31
Mowduucyada laga dooday ayaa u badnaa, qoqobnaanta, siyaasadda socdaalka, bay'adda, cimilada, guryeynta iyo gabaabsiga macallimiinta.
Telefishinka SVT ayaa xalay u qabtay dood hoggaamiyaasha xisbiga baarlamaanka Sweden. Siddeed hoggaamiye ee xisbiyada ayaa mowdoocyada ay ka doodeen waxaa ka mid ahaa, kalo qoqobnaaanta, soo-galootiga, Bay’adda, Cimilada, guryeynta iyo weliba gabaabsiga ka jira dhanka macallimiinta.
Mowdoocii dooda ugu badan dhalisay ayaa aheyd xaafadaha qoqoban oo dhaqax-tuur loo geysto boliska iyo shaqaalaha kale ee xiran dharka uniform-ka ah.
Doodda ayaa kululaatay kadib markii Isabella Lövin oo matalaysay xisbiga Miljöpartiet weerartay dowladdii hore ee alliansen oo ku eedeysay in siyaasadoodii ay masuul ka tahay weerarada iyo dhax-tuurka loo geysanayo shaqaalaha xiran dharka uniform-ka sida boliska iyo shaqaalha kale gurmarka degdega ah.
Hoggaamiyaha xisbiga Socialdemokaraterna yeri” xalka ma ahan keliya in la badaiyo boliska ka howl-gala xaafadahan- taas oo ka caraysiisay hoggaamiyaha xisbiga Sverigedemokraterna Jimmie Åkesson.
– Waxaan ujeedno waxay tahay natiijada ay dhalisay hoos u dhigista loo geystay adeegga bulsho ee xafadahan oo hoos loo dhigay xataa dayactirka xaafadahan, tusaale xisbiga garabka midig muddo siddeed sanno ah ayey hoos u jareen canshuuraha in ka badan 140 bilyan oo karoon. Sidaad daraadeed qoqobanaata aan maanta argano ma ahan mid la aqbali karo. Waxaan u sabab ah in aan dadaal lagu baxinin xaafadahan, ayey tiri Löven, isla markiiba waxaan u jawaabay Anna Kindberg Batra hoggaamiyaha xisbiga Moderaterna.
– Waa nasiib xubo in aan dooda ku bilowno nacnac cidlo ah, ayey tiri Anna Kindberg ´Batra hoggaamiyaha Moderaterna.
Lakiin Lövin ayaa ku adkeysatay in dhibaatooyinka ka jira xafadaha miljonprogram-ka ay u sababtahay siyaasaddii sideedda sanno ay wadeen xisbigyada alliansen markii xukunka dalka hayeen, oo ay ka jareen adeega bulshada dhaqaale kor u dhaafaya 14 00 bilyan oo karoon, kuna eedeysay xisbiyadan alliansen in ay sabab u yahiin dhax-tuurka maanta ka jira xaafadahan qoqoban. Laakiin eedeysantas waxaa k afalceliyey hoggamiyaha Liberalerna Jan Björklund. Iasgoo ku tilmaamey hadalka Lövin hadal layska yeri oo micno badan laheyn.
Qaybta hore ee doodii xalay ee hoggaamiyaasha ayaa lagu dheeraaday xaaladda xaafadahan qoqoban ee loogu Waco miljonprogramområde oo ah badanaa xaafadaha ku badanyahiin soogalootiga. Gaar ahaan moodada hoggaamiyaasha aad ugu doodayeen kuna celcelinayeen ayaa aheyd Nolltolrans oo mcinaheeda taahy in aan loo adkeysan falalka soo noqnoqnda ee ka dhaca xaafadahan sida dhax-tuur iyo weliba falalka kale ee burcadnimada ah , iayadoo lagu celcelinayeen in la kordhiyo booliska xaafadahn ka howl-gala.
Arrin kale oo aad looga dooday waxay aheyd qorshaha dowladda ku adkeyneyso siysaadda socdaalka iyadoo dowladda hore ugu dhaqawaaqdey in tirada qaxooti ee Sween qaabisho la gaarsiinayo heerka ugu hooseeya EU. Muddo saddex sanno ah ayaa Sweden sharciyadda qaxootiga siiso laga dhigayaa ku meel-gaar iyadoo la adkeynayo dib u mideynta qofka magangeliyada ka helay Sweden oo qoyskiisa. Xisbiga Miljöpartiet ayaa doonaya in sida ugu dhaqsaha badan dib loogu noqdo xeerkii hore qaabilada qaxootiga ee ahaa deeqsiga. Laakiin hoggaamiye Lövin ayaa difaacday siyaasadda dowladda ee ah in la adkeeyo xeerka qaabilaada qaxootiga.
– Waxaan awoodnay in aan masuuliyad qaadno, sabab ah haddii aanan dowladda ka sii mid ahaan laheyn markas Sweden waxay noqon laheyd dal daciif ah oo kalo qaybsan taas oo albaabka u furi laheyd cunsuriyiinta, ayey isabella Lövin oo xisbiga Miljöpartiet markii ugu horeysay u mataleysay doodda hoggaamiyaasha.